Kiwi Browser Developer namoaka ny kaody loharano an'ny mpizaha | Avy amin'ny Linux
Ny mpamorona Kiwi Browser dia namoaka ny kaody loharano an'ny browser-nao
Nanambara ny mpamorona ny tranokala finday "Kiwi" ny vaovao momba ny fanapaha-kevitrao hanatanteraka ny fanokafana totalin'ny kaody loharano rehetra an'ny tetikasa. Ilay mpizahatany Kiwi, nahazo laza be dia be satria lasa iray amin'ireo hany mpitety izay manohana ny fanitarana amin'ny Android.
Ho an'ireo tsy mahalala ny browser Kiwi tranonkala, tokony ho fantatr'izy ireo izany eIzy io dia miorina amin'ny fototry ny Chromium, fa tsy toy ny mpijery hafa, Kiwmanana endri-javatra isan-karazany aho izay mampiavaka azy, toy ny: blocker doka, “Fiarovana Cryptojacking, fanakanana ireo mpanara-dia invasive, famonoana ny AMP, filalaovana horonantsary sy mozika na dia maty aza ny efijery.
1 Momba ny Kiwi Browser
1.1 Navoaka ny kaody
Momba ny Kiwi Browser
Kiwi dia manolotra karazana fiasa tena ilaina, ary koa ny interface mahazatra sy mahazatra. Fa manampy koa zavatra sasany izay tsy azon'i Google nampidirina (na tsy tadiaviny).
Ohatra, Kiwi Browser no mpitety voalohany Miorina amin'ny Chromium amin'ny Android izay manohana ny fanitarana Chrome, dia iray amin'ireo voalohany nanolotra maoderina natokana ho an'ny alina ihany koa, saingy koa esoriny ireo "fampiasa" Google tsy dia malaza loatra.
Kiwi dia afaka miasa amin'ny fitaovana miaraka amin'ny Android 4.1 (ampitahaina amin'ny Firefox Preview izay mitaky Android 5) ary manasongadina ihany koa ireo fiasa hafa amin'ity tranokala finday ity.
Ny fahaizana mametraka plugins avy amin'ny Chrome Webstore ary mampiasa azy ireo amin'ny finday.
Ny maody alina namboarina namboarina ho an'ny efijery AMOLED.
Mode hametrahana ny bara adiresy eo ambanin'ny efijery.
Fanatsarana hafainganam-pandeha fanampiny fanampiny, toy ny fanesorana pejy sasany.
Ny fahaizana mampiasa Facebook Web Messenger amin'ny alàlan'ny m.facebook.com nefa tsy mila mametraka ny fampiharana finday Facebook.
Ny fomba tsiambaratelo izay tsy mahavonjy cookies, tsy hita taratra amin'ny tantaram-pitetezana, tsy apetraka ao amin'ny cache an'ny browser ary manakana ny famoronana pikantsary.
Pejy fandraisana an-tanana namboarina izay ahafahanao mametraka hitsin-dàlana tsy ara-dalàna.
Fahafahana mampitsahatra ny fanohanana ny teknolojia AMP (Accelerated Mobile Pages).
Fikirana hanakanana ny fampandrenesana sy kaody hanarahana ny mpitsidika.
Navoaka ny kaody
Mikasika ny fanapahan-kevitra izay manokana fa nosokafana ny kaody, dia mba hanohanana ireo fivoarana hafa ary koa mba hiantohana ny fandefasana amin'ny add-ons amin'ny finday voasoratra ho an'ny kinova desktop an'ny Chrome.
Azo alaina ao amin'ny Github izao ny kaody loharanom-pikarohana feno ary mampiasa ny lisansa BDS misy fehezan-teny telo mitovy amin'ny Chromium. Raha atao teny hafa, dia azo forked avy hatrany izy io, fa ny developer kosa dia mamporisika olona hafa hanampy amin'ny fampandrosoana.
Ny singa mahaliana indrindra eto dia ny kaody manokana izay mahatonga ny fanitarana hiasa amin'ny Android.
Marihina fa ireo mpanamboatra finday hafa dia afaka mampiasa kaody efa nampiharina tao Kiwi ho an'ny fivoarana avo lenta. Ho an'i Kiwi, ny fanokafana kaody dia mahaliana amin'ny fisarihana ireo mpandraharaha ivelany hiasa amin'ny tetikasa sy hanangana fiaraha-monina.
Ny repository ao amin'ny GitHub dia heverina ho referansa ary ampiasaina mivantana hampivelarana sy hananganana fananganana hafa.
Ny mpamorona Kiwi Browser dia manondro fa:
«Tao anatin'izay herinandro lasa izay dia niara-niasa tamin'ny mpanamory hafa aho mba hanampiana azy ireo hampiditra ny fampiasa Kiwi
Ny fitazonana tetik'asa fatra-paniry laza toy izany dia voaporofo fa fanamby ho an'ny mpamorona irery. Ny kinova farany an'ny Kiwi Browser ao amin'ny Google Play Store dia mifototra amin'ny Chromium kinova 77.0.3865.92, izay ao ambadiky ny farany Chromium kinova faha-83 izay kasain'i Google. Raha tokony havelany ho very maina ny tetikasa dia nanapa-kevitra ny arnaud42 fa hamoaka ny kaody loharano Kiwi Browser ao amin'ny GitHub «.
Ary farany, marihina fa tsy i Kiwi no mpitety tranonkala voalohany manohana ny fanitarana Chromium amin'ny Android, satria efa ela i Yandex no nanolotra azy ireo ary Samsung Internet dia manolotra fakan-telefaona Galaxy kely voafantina.
Ho an'ireo liana amin'ny famerenana ny kaody loharano amin'ity tranonkala finday ity dia afaka mandeha ianao mankamin'ity rohy manaraka ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » About us » Ny mpamorona Kiwi Browser dia namoaka ny kaody loharano an'ny browser-nao
Ny ankamaroan'ny antivirus dia azo kilemaina amin'ny alàlan'ny rohy an'ohatra